News - Machining Okwu Mmalite
Nhazi usoro ihe bu ihe ndi mmadu choro. Usoro nhazi nke a na-ezo aka ebe a na-ezo aka kpọmkwem na usoro nhazi eji eji ọgwụgwọ eme ihe. E nwere a ele mmadụ anya n'ihu yitewere na n'ibu nhazi ke "akpụ Usoro", na mkpa ka ị ntị ka ihe dị iche.
E nwere ọtụtụ ụdị machining. Usoro nhazi ndị ọdịnala abụghị ihe ọzọ karịa ịtụgharị, igwe, ịkọ ihe, ịgbagharị, ịkụ ọkpọ, ịkụcha, mkpọpu ala, wdg. Ọtụtụ n'ime usoro ọdịnala ndị a ji nwayọọ nwayọọ jikọta ma na-arụ ọrụ site na nkenke nhazi oge a. Newfọdụ ụzọ nkà na ụzụ ọhụrụ ji nwayọọ nwayọọ baa ọgaranya. Oghere akwụkwọ a pere oke, yabụ agaghị m edepụta ha niile ebe a. Naanị m ga-ewepụta usoro ndị metụtara ndị na-ese ihe na-etinye aka na ya, dị ka ikpochapu ọkụ, esere waya, polishing, stampụ, na ịtụgharị.
E nwere ike ịchịkọta njirimara nke ịkpụzi igwe dị ka: oke ọsọ, arụmọrụ dị elu yana oke nkenke.
Maka usoro usoro ịkpụzi dị iche iche, a na-egosipụta njirimara ha na tebụl na-esonụ:
Enwere ike iji aka ike họrọ n'etiti adịghị ike dị iche iche, ka ị wee nweta ike dị iche iche nke ihu ọrụ ọrụ
Nwere ike belata ihu igwe nke ihe arụ ọrụ ahụ, ma nweta ihu ọma ma ọ bụ enyo enyo
Ọ nwere ike ịhazi ike ọ bụla dị elu, ike-ike, nrụgide siri ike, nrụpụta dị elu na ịdị ọcha dị elu; enweghi ike imeputa ihe doro anya n'oge nhazi, ma o kwesiri maka nhazi obere ihe ntanye na ihe di nma
Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịgbanwe usoro ihe eji arụ ọrụ nke mbụ ma ọ bụ enweghị ntụpọ nke ala, na-ekpuchi usoro ihe eji arụ ọrụ ma na-akpụzi ntụpọ na nrụpụta, mana nwekwara ọmarịcha mma mma
Ngwa ndị dị
Metal, iko, seramiiki
Metal, seramiiki, iko
Conductive ihe dị ka ọla
Metal, acrylic, PC, PITA, iko
Sandblasting bụ usoro na-eji abịakọrọ ikuku ma ọ bụ mmiri na-akwọ ụgbọala ahụ ike tie elu nke workpiece na-ekesa n'ụzọ iji nweta ọcha ma ọ bụ ike ike. A gaghị atụle ebumnuche ọrụ dịka mwepụ nchara, mkpuchi peeling, nhicha, wdg. A na-atụle ngwa ngwa na teknụzụ ọdịdị ebe a. The general sandblasting usoro a na-eji na-eme ka matte / matte / ájá elu.
Enwere ike itinye aja na-ebugharị n'elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọrụ niile gụnyere plastik, ọla, iko, seramiiki, wdg, mana ihe a na-ejikarị eme ihe na-emepụta ihe bụ ọdịdị nke nsị nke ihe ndị e ji ígwè rụọ, karịsịa igwe anaghị agba nchara na aluminom.
Ihe osise nke waya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu usoro ọla ịchọ mma kachasị mma. Enwere ike ịhụ usoro ịbịaru na ọla, ọkachasị nchara nchara, ceramik na ihe plastik.
Waya ịbịaru n'ozuzu na-agụnye anụ ahụ na-egweri ihe, ihe osise CNC na laser, wdg.
Gbagharị, nke a na-akpọ knurling, bụ usoro ochie. A na-eji mma na-agbakwunye agbatị ma ọ bụ ihe ntanetị dị ka ihe enyemaka na-arụ ọrụ n'elu ọla arụ ọrụ iji mee ka esemokwu na ịkwalite ọrụ. Otú ọ dị, site na mkpa nke ọdịdị ọha na eze, ọmarịcha nke usoro ahụ ejiriwo nke nta nke nta mụbaa, ọrụ ịchọ mma nke ngwaahịa ụfọdụ dị ukwuu karịa ọrụ bara uru.
Ihe osise CNC bụ iji CNC mee ihe maka ịtụgharị na osise n'elu ebe a na-arụ ọrụ. Ihe nlere anya na usoro CD nke emepụtara dị ọcha, dị n'usoro na mgbe niile. A na-akpọ akwụkwọ a usoro nhazi. Tụkwasị na nke ahụ, ihe odide CNC a pịrị apị nwekwara ike ijikwa omimi iji mepụta mmetụta enyemaka.
Polishing na-ezo aka n'iji ihe eji arụ ọrụ, kemịkalụ ma ọ bụ mmetụta nke electrochemical iji belata nrụrụ elu nke ebe ọrụ ahụ iji nweta ihu ọma na nke dị mma. Ọ bụ ojiji nke polishing ngwaọrụ na abrasive ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ na polishing media ka gbanwee elu nke workpiece.
Mechanical polishing bụ a polishing usoro na-adabere na ịcha na plastik deformation nke ihe elu iji wepụ polished convex akụkụ iji nweta a ezigbo ebe. N'ozuzu, a na-eji osisi mmanụ, wiilị ajị anụ, ájá ájá, wdg, arụ ọrụ ntuziaka bụ isi.
Na ultra-nkenke polishing usoro nwere ike ji mee ihe maka elu elu àgwà chọrọ. Ultra-nkenke polishing bụ ojiji nke pụrụ iche abrasive ngwaọrụ, nke na-enwe megide esichara elu nke workpiece na a polishing mmiri mmiri nwere abrasives maka elu-ọsọ adiana. N'iji teknụzụ a, enwere ike nweta ihu ala nke Ra0.008μm, nke kachasị elu n'etiti usoro polishing dị iche iche. A na-ejikarị usoro a eme ihe na ngwa anya anya.
Fluid polishing na-adabere na elu-ọsọ eru mmiri mmiri na abrasive ahụ na-ebu ya iji saa elu nke workpiece iji nweta nzube nke polishing. Lyzọ ndị a na-ejikarị arụ ọrụ: nhazi ọrụ ugboelu abrasive, nhazi mmiri jet, hydrodynamic egweri na ihe ndị ọzọ.
Hydrodynamic egweri a chụpụrụ site haịdrọlik mgbali ime ka mmiri mmiri ọkara ebu abrasive ahụ na-asọpụta na-apụta gafee elu nke workpiece na elu na-agba. A na-ejikarị mmiri mmiri mee ihe pụrụ iche nke nwere ezigbo mmiri n'okpuru nrụgide dị ala ma jikọta ya na abrasives. Enwere ike ime abrasives nke ntụ ntụ silicon carbide.
Magnetik egweri na polishing
Magnetik abrasive polishing bụ iji magnetik abrasive na-etolite abrasive brushes n'okpuru ihe nke a ndọta ka Mike na workpiece. Uru ya bụ arụmọrụ dị elu, ezigbo mma, njikwa dị mfe nke ọnọdụ nhazi yana ọnọdụ ọrụ dị mma. Iji abrasives kwesịrị ekwesị, ike adịghị elu nwere ike iru Ra0.1μm.